Al-Shabaab oo Warqado digniin ah ku daayay Beledxaawo. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAAl-Shabaab oo Warqado digniin ah ku daayay Beledxaawo.
Al-Shabaab oo Warqado digniin ah ku daayay Beledxaawo.
November 24, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Al-Shabaab oo Warqado digniin ah ku daayay Beledxaawo.
Warar ay heshay Warqaat.Coom ayaa sheegaya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay warqado digniin ay ku daadiyeen xaafadaha degmada Beledxaawo ee Gobalka Gedo.
Dadka shacabka ayaa waxaa looga digayay in aysan la shaqeyn ka jirin Maamulka degmada Beledxaawo, islamarkaana waxaa ay sheegeen in cidii arintaasi ay ku arkaan tilaabo ay ka qaadi doonaan, sida ay Warqaat.Com u sheegeen Dadka Deegaanka oo diiday Magacooda loo adeegsado warbaahinta.
Sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay cadaadis xoog leh ay saareen Degmada Beledxaawo ee Gobalka Gedo.
Arintan ayaa ka dambeysay, kadib markii dhawaan Maamulka Degmada Beledxaawo ee Gobalka Gedo ay amaro dul dhigeen xaasaska Al-Shabaab ee ku sugan Degmadaasi, kaasi oo ku aadan in ay si deg deg ah uga baxaan Xaafadaha degmada Beledxaawo ee Gobalkaasi.
Warar Hoose ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay badan ka afduubteen degmada Beledxaawo ee Gobalka Gedo.
Cabsi badan ayaa Maanta ka jirta degmada Beledxaawo ee Gobalka Gedo, taasi oo soo Wajahday dadka Shacabka ee Ku nool Degmadaasi.
Dhawaan ayay aheyd markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gudaha u galeen degmada Beledxaawo ee Gobalka Gedo, iyagoona weerar ku qaaday Saldhiga iyo Xarunta degmada Beledxaawo ee Gobalkaasi.
Xiisad u dhexeeysa Al-Shabaab iyo Maamulka degmada Beledxaawo ayaa aad looga dareemayaa xaafadaha degmada iyo duleedka degmada Beledxaawo ee Gobalkaasi.
Dhaq-dhaqaaqyo militari ayaa ka soconaya deegaano dhow degmada Beledxaawo, kuwaasi oo sameynayan Ciidamada Militariga Soomaaliya.
Lama oga sida uu noqon doono xaalka degmada Beledxaawo ee Gobalka Gedo.
Madaxweynaha Soomaaliland oo ku wajahan Gobalka Sool.
Xubno Ka Mid Ah Guddiga Maaliyadda Oo Ka Horyimid Warbixintii Miisaaniyadda
704,071 total views, 1,288 views today
704,071 total views, 1,288 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
703,947 total views, 1,288 views today
703,947 total views, 1,288 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
703,977 total views, 1,288 views today
703,977 total views, 1,288 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
704,039 total views, 1,288 views today
704,039 total views, 1,288 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
704,093 total views, 1,288 views today
704,093 total views, 1,288 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]